Toddoba Hablood Oo Habeyn Tuxedo Ah | Ragga Stylish
Xisbiyada sanadka cusub ee xiisaha leh waxay u baahan yihiin dhar si ay u dhigmaan. Iyo qaabka ragga taas macnaheedu waa ku deeqa tuxedo wanaagsan.
Kuwa soo socdaa waa qaababka tuxedo ee aan kugu dhiirigelinayno inaad tixgeliso inaad macasalaamayso sanadka. Waxaana jira ikhtiyaarro badan oo badan inta badan aamminsan.
1 Madow tuxedo
2 Cadcad cad
5 Txedo jarjar
6 Midab dhalaalaya oo kala duwan
Mr Porter, 1.285 XNUMX (oo buuxa)
Madow waa fikrad aad u fiican waxay bixiyaan nadaafad iyo gariir caadi ah. Sidoo kale waa midabka ugufiican ee lagubilaabo hadii ay tahay jaakadaadii ugu horeysay ee cashada.
Zara, € 69.95 (jaakad)
Caan ku fariiso haddii aad u dabaaldegi doonto sanadka cusub sanadka cusub jawi diiran ama haddii, si fudud, fikradda ah soo dhaweynta sanadka cusub dhammaantood madow waa mid aad u caajis badan. Ogow taas waxaad isku dari kartaa jaakad cad iyo surwaal madowlaakiin maaha tan kale.
Mr Porter, 2.470 (jaakad)
Velvet waxay leedahay sifooyin badan oo ka caawiyay inay noqoto mid ka mid ah xulashooyinka ugu caansan, oo ay ku jiraan jilicsanaantiisa iyo xoojinta midabada.
Zara, € 99.95 (jaakad)
Dacwadaha Jacquard waxay muujinayaan in harqaanku uusan had iyo jeer khilaafsanayn taabashada shaqsiyeed ee daabacan ayaa bixisa.
Mr Porter, 1.980 XNUMX (oo buuxa)
Tuxedos-ka la jarjaray ayaa matalaya qaab kale oo aan kugu dhiirigelinayno inaad tixgeliso haddii aad rabto inaad ka soocdo inta kale. Xaaladdan, mahadsanid raaxeysashada bajaajka vibes, inkasta oo aysan ahayn sababtaas oo ay uga maqantahay casriyeyn weyn.
Midab dhalaalaya oo kala duwan
Mr Porter, 1.495 XNUMX (jaakad)
Jaakad casho ah oo midabkeedu qafiif yahay (midabka liiniga ah ee firfircoon ayaa lagu soo daray qolka labiska ee 'Kingsman: Goobaha Dahabiga ah') ayaa kuu ballan qaadaya yaan lagaa dareemin sanadka cusub ee sanadka.
Ciyaaraha Fashion, € 2.890 (jaakad)
Xirmooyinka dhejiska ayaa ku jira faahfaahin si loo tixgeliyo haddii aad rabto hoosta ka xarriiqo dabeecadda raaxada iyo dhalaalka leh ee dharkan. Fikrad weyn in la helo muuqaal dhalaalaya Sannadka Cusub (maldahan iyo macno ahaan).
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Noocyada loo yaqaan 'tuxedo' si loo tixgeliyo Sannadkan Cusub